Inkampani ye-bq ilungiselela uhlaziyo kwi-Android 7.0 Nougat yee-smartphones ezahlukeneyo | Iindaba zeGajethi
Inkampani yaseSpain bq ilungiselela le 2017 ngohlaziyo olutsha lwezixhobo zayo ezininzi, kwaye olu hlaziyo lucacile kwinkqubo yokusebenza ye-Android 7.0 Nougat. Ngokomgaqo nangokokomthetho osuka kwinkampani, uhlaziyo olutsha luya kuqala ukwenziwa kwikota yokuqala ka-2017 I-Aquaris X5 Plus, uluhlu lwe-U (i-Aquaris U Plus, i-Aquaris U kunye ne-Aquaris U Lite) kunye ne-Aquaris A4.5, ukuqhubeka kwikota yesibini yesibini kunye I-Aquaris X5, i-Aquaris M5 kunye ne-Aquaris M5.5.
Alithandabuzeki elokuba uhlaziyo lwenkqubo yokusebenza lusoloko lulolona nyango lulungileyo kwii-smartphones kunye nakubasebenzisi ngokwabo, ke ukuba ungomnye wabanini bezi terminals, unokuqiniseka ukuba kungekudala uza kufumana olu hlaziyo lwe-Android. Nanini na xa sineendaba malunga nohlaziyo lwesiphelo sinokuthi ziindaba ezinomdla kubanini bezi zixhobo, ngakumbi xa sele sazi amaxabiso ohlaziyo uninzi lwezixhobo ezine-Android OS.
Olu luluhlu lwezixhobo ezihlaziywa ezibonelelwe yi-bq uqobo:
Sonke siyacaca ukuba i-bq yangena kwimakethi yesixhobo esomeleleyo ngokwenyani, ukufumana amanani afanelekileyo enkosi ngokudityaniswa kwezixhobo ezilungileyo, ezinempawu ezintle kunye namaxabiso asezantsi ngokwenene, nangona kunjalo, kule mihla kunzima ngakumbi ukufumana indawo kule marike ibanzi ii-smartphones apho sifumana khona izixhobo ezinamaxabiso asezantsi kakhulu kunye nokusebenza okuphezulu / amanqaku. Ngaphezu kwako konke, eyona nto ibalulekileyo ngoku yile jolisa ekuhlaziyweni kwezixhobo kunye nokugcina abasebenzisi banelisekile, oku kubonakala ngathi sisiseko namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Inkampani bq ilungiselela uhlaziyo kwi-Android 7.0 Nougat yee-smartphones ezahlukeneyo